Sam na osimiri | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Sam na osimiri | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Sam na Beach bụ na n'ihu na-aga nke ọma elk oghere Electric Sam. Oputara otu mkpụrụ-onye bụ ezumike oge a ya na ezinụlọ ya ka a mara mma osimiri na Caribbean. Sonyere ya fun na a Mobile oghere Game ma merie ruo 2,275 ugboro nzọ gị.
Banyere Developer nke Sam na Beach
Ebe ọ bụ na-abịa na 2012, Elk Studios kemgbe ihe ịga nke ọma na-akọwapụta ya dị ka onye a ma ama online cha cha egwuregwu Mmepụta. Nke a Mobile oghere Game bụ ihe ọzọ na-enye obi ụtọ online oghere mepụtara site na ụlọ ọrụ.
Nke a Mobile oghere Game na-enye gị ngụkọta 243 ụzọ i nwere ike imeri a oghere. The ise-esi anwụde ndị ikpe uzo na-enye a anya nke mara mma osimiri. Clean beach na a doo anya na mbara igwe, nkwụ dotting osimiri ebe a na-, na a cute ezinụlọ mezue idaha. The ala-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya na-eche na oké osimiri isiokwu n'uche na ndị e kwuru transparently ma e wezụga ihe ndepụta bụ nke dị na Neon agba. The elu uru na akara na-anọchi anya ndị òtù ezinụlọ nke troll. Sam, nwunye ya Sandra, nwa-ya nwayi Maggie, na nwanne ya nwoke Ted niile abịa na pụrụ iche atụmatụ.
The ndị ọzọ na atụmatụ nke a Mobile oghere Game agụnye:
Free spins- see 3, 4, ma ọ bụ 5 mgbịrịgba ikposa na akara na-enweta 5, 10, ma ọ bụ 15 free spins. Onye ọ bụla ọzọ na mgbịrịgba icon ị kụrụ n'oge gburugburu ga-enye gị ihe ọzọ free atụ ogho.
electric emeso- Ọ bụla òtù ezinụlọ ọdịda n'oge free spins nye pụrụ iche atụmatụ. 3 ma ọ bụ karịa Sam oyiyi ọdịda n'oge mma ga-esi na ị nnyapade wilds. 3 ma ọ bụ karịa Sandra oyiyi ọdịda n'oge atụmatụ ga handsomely-akwụ gị ụgwọ na ruo 10x multiplier. 3 Maggie oyiyi ọdịda n'oge mma ga-eme ka ndị niile ala uru ihe oyiyi ifu si esi anwụde. 3 Ted oyiyi ọdịda n'oge mma ga-esi na ị nnyapade multipliers nke 2x ma ọ bụ 3X.
Beach Ikike icheta Respin- Mgbe ọ bụla i nwere a ogologo akara nke niile ndị òtù ezinụlọ na otu ahịrị mgbe egwuregwu, a mma na-triggered. Ị na-ọdịda a respin ebe niile ndị a ndị òtù ezinụlọ ghọọ nnyapade wilds.
Ọ ngwugwu a dum ọtụtụ nke ihe n'onwe ya. Ọ nwere oké visuals, na-akpali isiokwu, na ibu nke bonus atụmatụ. The Mobile oghere Game enye ọtụtụ nke edinam, karịsịa n'oge free spins Njirimara.